Olee otú naghachi faịlụ site Digital camcorder ma ọ bụ Voice teepu
> Resource> Igwefoto> Olee otú iji naghachi faịlụ site Digital camcorder ma ọ bụ Voice teepu
1. carelessly ehichapụ vidiyo si na Dị Ọcha tụgharịa camcorder, bụ ụzọ ọ bụla na-agbake vidiyo si na tụgharịa teepu?
2. Kpochapụrụ mkpa data site mmeghe na JVC Everio na ike adịghị enweta ya azụ ọ bụla ogologo, otú ịchọta ya na ihe ọ bụla n'ụzọ ime Camecorder data mgbake?
3. Digital edekọ ma ọ bụ camcorder kaadị ebe nchekwa njehie. Chọrọ ịnweta SD kaadị faịlụ site na bia Handy teepu na ọ gwara gị ka i usoro ya mbụ. Ọ ga-eme olu edekọ mgbake?
4. Mmadụ na mberede pịa ihichapụ ma ọ bụ Format bọtịnụ na dijitalụ edekọ na ndị dị oké ọnụ ahịa video, audio E niile na-arahụ. Ohere ọ bụla na-eme camcorder video mgbake?
Akpa ihe mbụ, mgbe ị na mberede izute otu n'ime nsogbu ndị ahụ, adịghị eji dijitalụ olu edekọ ma ọ bụ camcorder na-ọzọ E, ma ọ bụ kwesịrị ị na-agbalị itinye ọhụrụ data n'ime kaadị ebe nchekwa gị dijitalụ-edekọ ihe. N'ihi na ehichapụ ọdịyo na vidiyo faịlụ adịghị akwụsị na-adịgide adịgide ozugbo, ma ọ bụrụ na ha na-overwritten site ọhụrụ data. Overwriting ga-eme ka ha na-ehichapụ ruo mgbe ebighị ebi na unrecoverable.
Mgbe ahụ otú naghachi ehichapụ faịlụ? I nwere ike ime ya na-enweghị enyemaka ọ bụla nke a data mgbake ngwá ọrụ. Ụzọ kasị mma bụ na-agbalị a ọkachamara na a pụrụ ịdabere data mgbake usoro. N'ezie, ọ ga-ekwe ka ị weghachite ehichapụ videos na music na ị na-efu.
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows, Wondershare Photo Recovery gị ga-abụ nhọrọ ziri ezi. Ọ bụghị ihe dị a foto mgbake omume, kamakwa naputa ehichapụ vidiyo na ọdịyo si dijitalụ media gụnyere olu edekọ na camcorder.
Ọ bụrụ na ị na-eji Mac, mgbe ahụ, na-atụgharị Wondershare Photo Recovery for Mac. Ọ nwekwara ike naghachi videos, ọdịyo ma ọ bụ music.
Cheta na: Iji ịrụ ihe ịga nke ọma video ọ bụ ọdịyo faịlụ mgbake gị dijitalụ olu edekọ ma ọ bụ camcorder, mma ịzọpụta natara faịlụ ọzọ disk.
Step1. Jikọọ dijitalụ olu edekọ na kọmputa
Akpa jikọọ gị dijitalụ olu edekọ ma ọ bụ camcorder na kọmputa, mma site a USB n'ọdụ ụgbọ mmiri USB ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị na-mmasị na a ike mbanye, ma ọ bụ jiri a kaadị agụ ma ọ bụrụ na e nwere na kaadị ebe nchekwa ma ọ bụ arapara insides dị ka ọ bụ ọzọ ala. Mgbe ahụ malite usoro ihe omume na pịa "Malite" na-amalite.
Step2. Họrọ dijitalụ olu edekọ ike iṅomi.
Step3. Preview na-agbake audio, video, foto site na dijitalụ olu-edekọ ihe.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na mbụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa echiche.
Video nkuzi nke igwefoto dijitalụ ma ọ bụ voide edekọ mgbake
Olee otú Naghachi Data si Kaadị ebe nchekwa
Olee otú Naghachi Pictures si Digital Igwefoto Kaadị ebe nchekwa
Olee otú Igosi SD Kaadị Iweghachite
Top 10 ese foto nke ngwa ngwa Motion
Olee otú Naghachi Photos si Leica Igwefoto
Free Igwefoto draịva Download
Top Iri 8mm Camcorders / Video ese foto maka ndekọ
Olee otú Naghachi Photos si Minolta Igwefoto
Olee otú Naghachi Photos si Ricoh Igwefoto
Olee otú Bugharịa Photos si Igwefoto Roll ka Album
Casio Igwefoto Photo Recovery Guide
Naghachi foto na vidiyo si Panasonic Lumix Digital Igwefoto